घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » बेल्जियम ब्रेकिंग न्यूज » ब्रसेल्स रेनेसान्स फेस्टिवल भोलि फर्कन्छ
बेल्जियम ब्रेकिंग न्यूज • ब्रेकि European युरोपेली समाचार • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • पाक • संस्कृति • फेशन समाचार • अतिथि सत्कार उद्योग • उद्योग समाचार बैठक • समाचार • जिम्मेवार • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा रहस्य • यात्रा तार समाचार • विभिन्न समाचार
१ June जुन देखि ११ जुलाई सम्म, ब्रसेल्स रेनेसाँस फेस्टिवल (पहिले क्यारोलस वी महोत्सव) उत्सवको साथ फुटिरहेको संस्करणको लागि फर्किन्छ।
यस वर्ष, ठूलो ओम्मेगाang परेड हुने छैन।
माईसन डु रोइ (कि House्ग हाउस) ले १ 1500०० को ब्रसेल्समा जनतालाई डुबायो, जुन शहरको पर्खालबाट राम्रोसँग सुरक्षित थियो।
प्रदर्शनहरूको एक कलिडेस्कोपले १usse औं र १ 15 औं शताब्दीमा ब्रसेल्सको अद्वितीय चरित्रलाई हाइलाइट गर्दछ।
यो ब्रसेल्स पुनर्जागरण महोत्सव गर्मीमा स्टाइलमा लात हान्दै! यस वर्ष यो फेस्टिवल पुनर्जागरणको बखत युरोपेली विरासत र इतिहासलाई समर्पित तीन हप्ताका घटनाहरूमा फैलिएको छ। त्यस समयमा ब्रसेल्स युरोपको सबैभन्दा ठूलो शक्तिहरू मध्ये एक थिए र उनले केन्द्रीय भूमिका खेलेका थिए, जसमा १les औं शताब्दीको सबैभन्दा प्रभावशाली सार्वभौम चार्ल्स वीले राजधानीलाई आफ्नो निवास स्थानको रूपमा छनौट गरे।
यस वर्ष, ठूलो ओम्मेगाang परेड हुने छैन। तर चिन्ता छैन! त्यहाँ ब्रसेल्सको सांस्कृतिक संस्थाहरु द्वारा आयोजित धेरै उच्च गुणवत्ता गतिविधिहरु हुनेछ। उत्सव सप्ताहन्त, प्रदर्शनहरू, कार्यशालाहरू, निर्देशित भ्रमण, सम्मेलनहरू र केही अपवादहरू ... इतिहास, पुरातत्व र सबै उमेरहरूको साहसिक प्रेमकर्ताहरूको लागि प्रशस्त।
यस वर्ष कार्यक्रममा के छ?
माईसन डु रोइमा एक पुनर्जागरण सप्ताहन्त
माईसन डु रोइ (कि House्ग हाउस) ले १ city०० को ब्रसेल्समा जनतालाई डुबायो, जुन शहरको पर्खालबाट राम्रोसँग सुरक्षित थियो, र उनीहरूलाई काडेनबर्ग दरबारमा आमन्त्रित गर्दछ। मशालको साथ, आगन्तुकहरूले प्रभावशाली टेपेस्ट्री कार्टुन पत्ता लगाउँदछन्। संग्रहालयका स्टाफ पोशाकमा हुनेछन् र कथाकारहरूले चार्ल्स वीको कल्पित कथाहरू सुनाउनेछन्। यो परिवारहरूका लागि उत्कृष्ट आउटिंग हो, जसले रेनेसासन संगीतको परिचय लिन सक्दछन्।
कउडेनबर्ग दरबारमा एक WOUAW सप्ताहन्त
WAOUW छातीहरु को खजाने को पूरा गर्न को लागी र पूरा गर्न मिशनहरु छन्। साना अन्वेषकहरू र सबै प्रकारका साहसीहरूले भूमिगत गोता लगाउन सक्छन् र ब्रसेल्स र यसको दरबारको प्रतिष्ठित भूतमा डुबाउन सक्छन्।
हेले गेटमा प्रदर्शन, मैसन डु रोइ, ग्रान्ड सेरमेन्ट रोयल एट डी सेन्ट? जर्जस डेस आर्बालिटियर्स संग्रहालय, कउडेनबर्ग पाल
प्रदर्शनहरूको एक कलिडेस्कोपले १th औं र १ and औं शताब्दीमा ब्रसेल्सको अद्वितीय चरित्रलाई हाइलाइट गर्दछ। जनताले प्रसिद्ध स्थानीय टेपेस्ट्री, शहरको राजनैतिक व्यवस्थापन र त्यसबेलाको विकासको पत्ता लगाउनेछ। ओएमगेang्गको दृश्य पर्दा पछाडि कुनै कुरा उल्लेख नगराउन उनीहरू केबीआरका अग्रदूत “बुर्गन्डीको डुक्स अफ बुर्गन्डी” को भ्रमण पनि गर्न सक्दछन्।
कार्यशाला र गतिविधिहरू
आगन्तुकहरूले मध्य युगको अन्ततिर र आफूलाई डुबाउने अवसर पाउँछन्
विभिन्न कार्यशाला र गतिविधिहरूको माध्यमबाट पुनर्जागरण। केबीआरले वर्कशप प्रदान गर्दैछ कसरी एउटा कलरको साथ लेख्ने र रments्गको साथ पेन्ट गर्ने जुन उनीहरू मध्य युगमा गरे। कउडेनबर्ग अन्वेषण खेल साहसिक र मदिरा चाख्ने आयोजना गर्दैछ।
अवलोकन गर्नुपर्दछ असाधारण निर्देशित भ्रमणहरू
एक नयाँ अनुभव प्रस्तावमा छ: सेन्ट्स कैथेड्रलको टावरको भ्रमण माइकल
र गुडुला। विभिन्न निर्देशित टूर कम्पनीहरूले भर्खरको पुरातात्विक खोजहरू, स्पेनिश उपस्थिति, मानवतावाद, चिकित्सा र कलामा भएका प्रगति, र १ 16 औं शताब्दीमा राजधानीको विकासको माध्यमबाट ब्रसेल्सको अन्वेषण पनि गर्नेछन्।
सम्मेलनहरू निर्धारित गरियो, जसले १usse औं र १ 15 औं शताब्दीको मोडमा ब्रसेल्सको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नेछ। तिनीहरू विशेष रूपमा चित्रकला र हाम्रो क्षेत्रमा लघुचित्रको स्थानको साथ व्यवहार गर्नेछन्।
केबीआरको रेस्टुरेन्ट अल्बर्टमा केहि मध्य युगका स्वादहरूमा तपाईंको स्वादका कलहरू व्यवहार गर्नुहोस्
केबीआरको शीर्षमा रहेको ब्राण्ड-नयाँ रेस्टुरेन्टमा मेस्नागियर डे पेरिसबाट प्रेरित मध्ययुगीन टचहरू सामेल हुनेछन्, जसको बुुकुन्डीको ड्युक्सको एउटा प्रतिलिपि थियो।